“JO 2024”: efa azo antoka ny fandraisan’i Paris | NewsMada
“JO 2024”: efa azo antoka ny fandraisan’i Paris
Karazany niverin-dalana ihany i Los Angeles amin’ny fandraisana ny “Lalao olympika 2024” manoloana an’i Paris. “Mety ho sarotra ny hanatanterahana izany…”, hoy ny ben’ny Tanànan’i Los Angeles, Eric Garcetti, manomboka tsy hanisy teny intsony ny momba ny “JO 2024”, raha ny filazany tamin’ny 26 jolay teo. Saingy, tsy milefitra kosa io tanàna iray lehibe any Etazonia io ny amin’ny ady ataony amin’ny fandraisana ny “JO 2028”.
Azo heverina fa ho tanteraka ihany izany ny nofinofin’i Paris, raha manomboka mazava ankehitriny ny safidin’i Los Angeles, mpifaninana tokana aminy. Efa niady mafy ary tsy milefitra amin’ity faniriany ity rahateo ny Renivohitra frantsay. Raha fintinina izany, karazany tsy mpifaninana intsony i Los Angeles ho an’ny “JO 2024”. I Paris irery ihany sisa eo amin’izany toerana izany, ary mazava, tsy hisy ankamantatra intsony ny fifidianana hatao any Lima, Pérou, ny 13 septambra ho avy izao.
Amin’izao fotoana izao ary, efa mitodika any amin’ny “JO 2028” ny Amerikanina. Afaka volana vitsivitsy monja, hoporofoin’io tanàn-dehibe iray any Etazonia io amin’ny komity olympika ny fahavononany sy fahafahany mandray izany lalao izany. Hojeren’ny komity olympika sy hanaovana tomban’ezaka dieny izao ireo fomba rehetra naroson’i Los Angeles ho an’ny “JO 2024” raha azo hotanterahina amin’ny 2028. Iza aty Afrika ary ny efa mba mikajy handray ny “JO 2032” ?